Tuesday January 11, 2022 - 09:59:45 in Articles by Hadhwanaag News
Qorre, Kamaal Marjaan
Imisa jeer ayaa ay kugu dhacday in buug ama qoraal kale oo aad xiisaysay haddana aad dib u dhigatay akhriskiisa, adiga oo nafta u sheegaya in hadda aanad waqti kugu filan haysan. Wahsiga, shaqo dib u dhigashada iyo maahsanaantu waxa ay ka mid tahay caadooyinka iyo dhaqannada ay inta badan ee dadka dunidu maanta ka cawdaan.
1. Wahsiga iyo shaqo dib u dhigashadu ma keento oo keliya in shaqadu dib u dhacdo ama sidii la rabay u qurux badnaan weydo. Balse waxaa dheer in qofku uu marka dambe haddana is canaanto, taas oo abuurta dareenno taban iyo xaalado nafsadeed oo ay ka mid yihiin, sakati nafsi ah, walbahaar, is canaanasho iyo warwar weyn.
1. Haddii shaqada kuu taallo aad u aragto in aanay muhiimad weyn lahay, ama in aanay mudnaanta, ama in cidda shaqada kuugu maamulaysaa aanay muhiimad weyn siinayn hawshaas.
2. Marka aad aragto adiga oo waqtigaaga ku luminaya wax aan muhiimad weyn lahayn xilli ay ku taallo shaqo waajibaadkaaga ka mid ahi.
3. Marka iyada oo shaqo kuu taalla aad aragto adiga oo waqtiga ku luminaya waxyaabo aan waxsoosaarka aad u baahantahay lahayn, sida daalacashada baraha xidhiidhka bulshada, oo aad hadba dhan u socoto si aad sawirrada iyo qoraallada u eegto.
1. Shaqada oo culus ama qofka ku adag iyo hawlaha xasaasiga ah ee inooga baahan in aynu xariifnimadeenna, aqoonteenna ama kartideenna ku muujinno ayaa ka mid ah sababaha keena in shaqada gudagalkeeda aynu ka warwareegno. Laga yaabaa in sababtu ay tahay kalsoonidarro inaga haysa in hawshaas aynu qaban karno ama cabsida fashilaadda.
2. Qofka oo arkaya wax kale oo uu xiisaynayo, tusaale ahaan haddii shaqadu ku adagtahay, internet na uu haysto oo uu waxoogaa nafta ku maaweelin karo baraha bulshada ama daawasho filim, markaba naftu xaggaas ayaa ay u jeesanaysaa.
3. Hawl shaqadeenna maalinlaha ah ka mid ah, dhibaatana aanay qabashadeedu lahayn laakiin muddo dheer qaadanaysa, wax abaal gaara ah oo aynu ka helaynaana aanay jirin, ama magac iyo xiise degdeg ah oo laga helayo marka ay dhammaataa aannu muuqan.
4. cabsi iyo walaac awgood; waxa se muhiim ah in aynu ogaanno in hawlaha muhiimka ah ee waaweyn ay ku lammaan yihiin cabsi laga qabo fashilaad, taasina ay marar badan sababto in aynu ka warwareegno gudagalka hawshaas iyuo ku dhiirashadeeda.
5. Sideedaba aadamuhu hawl kasta oo uu qabanayo waxa uu ka fishaa abaalmarin iyo in lagu bogaadiyo. Abaalmarinahaasi mar kasta ma’aha wax la taaban karo oo ay cid kale siiso. Mararka qaarkood qofku isaga ayaa naftiisa abaalmariya ama maamulkiisa shaqo ayaa ammaan iyo bogaadin ku abaalmariya.
In qofku aanu abaalmarinahaas filanaynin ama naftiisu is abaalmarinayn, oo tusaale ahaan aanu u arkayn hawl naftiisa u fiican oo ay ku farxayso. Waxa ay ka mid tahay sababaha dhiirrigeliya wahsiga iyo ka warwareegista shaqada.
LA SOCO QAYB KALE....